नायिका प्रियँका कार्की गर्भवति बारे खुल्यो फरक रहस्य – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/नायिका प्रियँका कार्की गर्भवति बारे खुल्यो फरक रहस्य
नायिका प्रियँका कार्की गर्भवति बारे खुल्यो फरक रहस्य
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा नायिका प्रियङ्का कार्की गर्भवती भएकी हुन् वा मोटाएकी हुन् भन्ने जिज्ञासा चर्चामा छ । त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा सेलिब्रेटीहरुको यस्तो गसिप चर्चामा आउनु सामान्य नै हो । केही समयअगाडि नायिका श्वेता खड्का ‘आमा’ बन्दै शिर्षक राखी विभिन्न गसिप चलेको थियो । यस्तै अहिले सामाजिक सञ्जालमा नायिका प्रियङ्का कार्कीको ‘होली’मा खिचिएको तस्बिरहरू चर्चामा आएको छ । वास्तवमा प्रियङ्का यी तस्बिरमा केही मोटाएको जस्तो देखिएकी छिन् ।
तसर्थ उनका केही प्रशंसकले उनी गर्भवती भएकी हुन् कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । केही समययता हेर्ने हो भने नायिका कार्की सामाजिक सञ्जालमा खासै सक्रिय देखिन्नन् । फिल्मका प्रोजेक्ट नभए पनि प्रायः उनलाई म्युजिक भिडियोमा देख्न पाइन्थ्यो । यिनै कुरालाई आधार मान्दै उनको तस्बिरमा थुप्रै प्रशंसकले गर्भवती भएको हो ? भनी कमेन्ट गरेका छन् ।यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा नायिका प्रियङ्का कार्की गर्भवती भएकी हुन् वा मोटाएकी हुन् भन्ने जिज्ञासा चर्चामा छ ।
त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा सेलिब्रेटीहरुको यस्तो गसिप चर्चामा आउनु सामान्य नै हो । केही समयअगाडि नायिका श्वेता खड्का ‘आमा’ बन्दै शिर्षक राखी विभिन्न गसिप चलेको थियो । यस्तै अहिले सामाजिक सञ्जालमा नायिका प्रियङ्का कार्कीको ‘होली’मा खिचिएको तस्बिरहरू चर्चामा आएको छ । वास्तवमा प्रियङ्का यी तस्बिरमा केही मोटाएको जस्तो देखिएकी छिन् ।
तसर्थ उनका केही प्रशंसकले उनी गर्भवती भएकी हुन् कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । केही समययता हेर्ने हो भने नायिका कार्की सामाजिक सञ्जालमा खासै सक्रिय देखिन्नन् । फिल्मका प्रोजेक्ट नभए पनि प्रायः उनलाई म्युजिक भिडियोमा देख्न पाइन्थ्यो । यिनै कुरालाई आधार मान्दै उनको तस्बिरमा थुप्रै प्रशंसकले गर्भवती भएको हो ? भनी कमेन्ट गरेका छन् ।
बिहिबार भुलेर पनि कसैलाई नदिनुस् पैसा सापटी, यस्तो सम्म हुनसक्छ नराम्रो प्रभाव
बेसार र नरिवलको तेल प्रयोग गरी सजिलै हटाउनुहोस् अनुहारको पुरै दाग ! [तरिका सहित]
यी अक्षरबाट नाम आउने व्यक्ति हुन्छन् निकै भाग्यमानी, तपाईको नाम कुन अक्षरबाट ?
मंसिर १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल !